OG Seed Vs Nigma – Gniap
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ အသင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ OG Seed နဲ့ Nigma နှစ်သင်းကတော့ Dream League Major – Closed Qualifiers မှာ Best of3ပွဲစဉ် ထိပ်တိုက် ကစားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပွဲချိန်ကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီခွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
DHDL Open Qualifier Status
TI 8 + TI9winner တွေ အနီးကပ် ကြီးကြပ်နေတဲ့ OG Seed ပဲ အနိုင်ရမလား ?
ဝါရင့် သဘာရင် Kuroky တို့ အသင်းသစ် ပဲ အနိုင်ရမလား ?
ဆိုတာကတော့ ပရိတ်သတ်တယောက် အနေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်ဗျို့ ….